Bloggoween farxad leh! | Martech Zone
Bloggoween farxad leh!
Talaado, Oktoobar 30, 2007 Axad, Sebtembar 30, 2012 Douglas Karr
Hadaad fursad hesho, ku jooji barta maanta. Waxaan go’aansaday inaan u labisto sanadkaan Halloween.
Waxaan la yaabanahay dad badan oo aan qurxin baloogyadooda maalmaha dabaaldegga iyo ciidaha. Wiilkeygu wuxuu u lebistay sidii nin da 'ah (xitaa wuxuu ka helay IHOP Cardigan dhanka wanaagga), gabadhayduna waxay ku jirtaa marxaladdeeda Emo Psycho Killer.
Aniga ahaan, waxaan kujiraa khakiskayga aaminka ah berrito, laga yaabee inaan dhamaanteed la baxo jaakad goonni ah!
Ka caddeynta Yahoo!
Oktoobar 30, 2007 at 11:17 PM
Gabi ahaanba adiga ayey kugu habboon tahay, Doug. Halloween Wanaagsan Halloween!
Oktoobar 30, 2007 at 10:44 PM
Kama dhigi doono oh faallooyinka muuqda ee ku saabsan hagaajinta .. daacadi maayo 🙂
Oktoobar 31, 2007 at 6:01 AM
Hmmm, Frankenstein oo ku labisan dhar ganacsi. La yaab malaha waxa ay Mary Shelly ka fikiri lahayd arrintaas… Waxaan qiyaasi karaa oo keliya wax ka beddelka ku saabsan Thanksgiving iyo Christmas.
Ciid wanaagsan. Ku hay dhakhaatiirtaas ilkaha lacag.
Oktoobar 31, 2007 at 6:40 AM
Waxaad u egtahay mid fiican. Ciid Wanaagsan!
Jason (Koobka Bean)
Oktoobar 31, 2007 at 7:32 AM
Uguyaraan way fududaan doontaa inaad hadda maskaxdaada xulato.
Oktoobar 31, 2007 at 10:01 AM
Faallooyinka ugufiican illaa iyo hadda!
Oktoobar 31, 2007 at 8:49 AM
Marka aaway dharkii? haha.
Oktoobar 31, 2007 at 9:25 AM
Oktoobar 31, 2007 at 2:51 PM
Ha noqon qof neceb
Oktoobar 31, 2007 at 9:26 AM
Runtii waa inaad qof uun fiirisaa in la jaro ay ku dhici karto cudurka. Gangrene malaha? Ciid Wanaagsan!
Oktoobar 31, 2007 at 10:09 AM
Waxaad hadda sameysay kiis weyn oo ah inaad meel iska dhigto akhristaha RSS mararka qaarkood oo aad runtii booqato baloog aad jeceshahay. Waan gabi ahaanba seegi lahaa tan! Waad ku mahadsan tahay qosolkii ugu fiicnaa ee aan maanta qabtay! 🙂
Oktoobar 31, 2007 at 10:49 AM
Uma labbisanin balooggeena Halloween, si kastaba ha noqotee, waxaan dhajiyay sawir ka mid ah kooxdayada suuqgeynta iimaylka oo u lebbisan sida 'kooxda-e'
Oktoobar 31, 2007 at 1:01 PM
Taasi waa wax aad u qabow! Waxay umuuqataa dukaan madadaalo oo laga shaqeeyo! Waad ku mahadsan tahay inaad i ogeysiisay inaanan ahayn kali goof ee shabaqa ku jira.
Oktoobar 31, 2007 at 1:29 PM
Rumayso ama ha rumaysan, fikirka oo dhan ayaanu ku riyoonay ilaa shalay galab. Waxaan layaabay inaan isla jiidanay.
Oktoobar 31, 2007 at 1:37 PM
Waad ilawday qoorta lugaha, laakiin markale waxaad marwalba lahayd fur fur.
Oktoobar 31, 2007 at 2:19 PM
Waxaad maya fikrad sida runta ah taasi waa, Sterling!
Oktoobar 31, 2007 at 6:11 PM
Wow, mowduucyada ciidaha runtii waxay umuuqdaan kuwa shaqeynaya. Waxaan halkaan in yar ka ahaa aqriste, laakiin boostada 'bloggoween post' ayaa igu dhiiri galisay inaan faallo ka bixiyo, ugu dambeyntiina inaan saaxiriintayda ruuxa sanadka cusub ku daro boggeyga. DIGNIIN: Amaan Maahan SHAQADA: (Waxaan suuqgeynaa madadaalada dadka waaweyn, laakiin balooggu wali waa diiradda suuq geynta, ma ahan porn) Ku faraxsan Bloggoween, Bakhaarrada Khaaska ah ee Khaaska ah ee Spooky.